सुर्खेतका नेकपा नेता : काे-कसको पक्षमा ? – Dullu Khabar
सुर्खेतका नेकपा नेता : काे-कसको पक्षमा ?
११ पुष २०७७, शनिबार १३:४७
सुर्खेत । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै विभाजनको अन्तिम विन्दुमा पुगेको नेकपामा नेता तथा कार्यकर्ताहरू आ–आफ्नो गुट सुरक्षित गर्न लागि परिरहेका छन् । पार्टी विभाजनको प्रभाव जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । जिल्ला अध्यक्ष सचिव, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू आ–आफ्नो गुटमा लागेका छन् ।
दुईवटा प्रतिनिधि सभा, चारवटा प्रदेशसभा र ९ वटा स्थानीयतह रहेको सुर्खेतमा अहिलेसम्म प्रचण्ड–माधव पक्ष बलियो देखिएको छ । नेकपाका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद धुव्रकुमार शाही, सचिव कृष्ण जिसी दुवै प्रचण्ड–माधव पक्षतिर लागेका छन् । तीमध्ये अध्यक्ष शाही पूर्व एमाले निकट हुन भने जिसी पूर्व माओवादी निकट हुन् ।
यस्तै जिल्ला इन्चार्ज नरबहादुर विष्ट, सह–इन्चार्ज झकबहादुर मल्ल र बिन्दमान विष्ट पनि प्रचण्ड–माधव पक्ष तिरै लागेका छन् । इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज तीनै जना पूर्व माओवादी पक्षका हुन् । पार्टी कार्यालय सदस्य मोहन बडुवाल, टोपबहादुर रास्कोटी पनि प्रचण्ड–माधव पक्षमै देखिएका छन् ।
यस्तै निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीमा पनि प्रचण्ड–माधव पक्ष बलियो देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ का संयोजक बखतबहादुर खत्री, सचिव गणेश विक, क्षेत्र नं २ मा संयोजक गोविन्द तिमिल्सेना प्रचण्ड–माधव पक्षतिर देखिएका छन् । क्षेत्र नं २ का सचिव इन्द्र केसी भने केपी ओली पक्षमा देखिएका छन् ।
प्रदेश सभातर्फ क्षेत्र नं १ को प्रदेश (क) गठन भएको छैन भने (ख) का संयोजक बोधबिक्रम जिसी, क्षेत्र नं २ प्रदेश (क) मा संयोजक टोपबहादुर रास्कोटी, सचिव रत्न गाहामगर र प्रदेश (ख) का संयोजक खड्ग विक पनि प्रचण्ड–माधव पक्षमा देखिएका छन् ।
क्षेत्र नं २ प्रदेश ‘ख’ का सचिव घनश्याम पाण्डे केपी ओली पक्षमा भएको बताइए पनि आधिकारिक रूपमा खुलिसकेका छैनन् ।
जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये पूर्व एमालेलाई ५ तथा पूर्व माओवादीलाई ४ वटाको जिम्मेवारी दिइएको थियो । ९ वटा स्थानीय तहमध्ये सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्र केसी र सचिव झुपबहादुर बुढा दुवै प्रचण्ड–माधव पक्षतिर लागेका छन् । गुर्भाकोट नगरपालिकामा अध्यक्ष देवबहादुर खत्री, सचिव मोतिलाल विक, भेरीगंगा नगरपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कार्की प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेका छन् ।
भेरीगंगा नगरपालिकाका सचिव टीकाराम सुवेदी ओली पक्षमा लागेको बताइए पनि आधिकारिक रूपमा खुलिसकेको छैन । यस्तै चिंगाड गाउँपालिकामा अध्यक्ष सम्मर विक प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा लागेका छन् । सचिव हर्कबहादुर रानाको खुलेको छैन ।
त्यस्तै, लेकवेशी नगरपालिकामा अध्यक्ष टीकाराम सोमै, सचिव मदन गाहा प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अध्यक्ष गंगाराम तिमिल्सेना, बराहताल गाउँपालिकामा ओमबहादुर महतारा, सचिव बलबहादुर कठायत, पञ्चपुरी नगरपालिकामा अध्यक्ष मनबहादुर विक, सचिव केशव शाही र चौकुने गाउँपालिकामा अध्यक्ष गंगाराम विक, सचिव हरि अधिकारी प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सचिव गणेश ओली केपी ओली पक्षमा लागेका छन् ।
प्रदेशसभामा सुर्खेतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद यामलाल कंडेल, खड्कबहादुर खत्री र ठम्बरबहादुर विष्ट ओली समूहमा गएका छन् भने पद्मा खडका र विन्दमान विष्ट प्रचण्ड–माधव समूहमा रहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद धुव्रकुमार शाही प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेका छन् भने क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद नवराज रावत ओली समूहमा रहेका छन् ।
नेकपा जिल्ला सचिव कृष्ण जिसीले आफूहरू अझै पनि पार्टी एकताको पक्षमा रहेकाले पक्ष–विपक्ष भनेर छुट्याउनुपर्ने अवस्था आइनसकेको बताए । ‘केन्द्रमा देखिएको पार्टीको समस्या प्रदेशमा पनि देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । अहिले केही नेताहरू प्रचण्ड–माधव र ओली पक्ष समेत भन्न थालिएको छ ।’
नेकपा सुर्खेत पार्टी कार्यालय सदस्य मोहन बडुवालले नौवटै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको गलत कार्यको विपक्षमा रहेको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई ‘कु’ गर्नुभएको छ । त्यसको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ । यो गलत कामलाई हामी जनताका माझ लिएर जान्छौँ । जनतालाई बुझाउँछौँ ।’ पार्टी विभाजनको परिणाम जनताले दिने उनको भनाइ छ ।
Tags: कर्णाली प्रदेशनेकपाराजनीतिसुर्खेत